Filtrer les éléments par date : vendredi, 28 août 2020
Nosamborin’ny andia-miaramila mpioko ny 18 aogositra 2020 ny filohan’i Mali, Ibrahim Boubacar Keïta na IBK. Nametra-pialana avy hatrany izy. Maromaro koa ireo mpitondra ambony nosamborin’ireo mpioko, anisany ny depiote zanaka lahy ny filoha IBK.
Nisy iraky ny CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) tonga nanao fanelanelanana tany Mali, nitaky ny hamotsorana ny filoha IBK sy ireo nosamborin’ny miaramila mpioko nandrombaka ny fahefana ny vondrona iraisam-pirenena. Nilatsaka koa ny sazy, mihantona tsy ho mpikambana eo anivon’ny vondrona Afrikana i Mali.
Ny alakamisy 27 aogositra 2020 no navotsotr’ireo miaramila i IBK. Tafatsoaka any ivelan’i Mali ny zanany lahy.
vendredi, 28 août 2020 19:55
Andry Rajoelina: Mitsidika an’i Vakinankaratra
Mitsidika an’i Vakinankaratra ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina io maraina io. Fantatra tamin’izany fa anio sy rahampitso izy no ho eto Antsirabe, Renivohitr’i Vakinankaratra.
Nisantarany ny fitsidihana ataony ny fitokanana ny Biraom-paritry ny Polisim-pirenena eto Vakinankaratra, izay nambara fa hananganana toa io avokoa ny faritra 21 hafa aoriana.
Taorian’izay dia nisantatra ny fizarana Vatsy tsinjo tao an-tokontanin’ny Sekoly Loterana Farimbona ny tenany ka nisy solontena vitsivitsy nisitraka izany.
vendredi, 28 août 2020 19:11
Moramanga: Vitaina ao anatin’ny 60 andro ny fanamboarana rarivato
Haharitra 60 andro nanomboka ny alarobia 19 aogositra lasa teo ny asa fanamboarana ny lalana rarivato eto an-tampon-tanànan’i Moramanga.
Ireo toerana tena ratsy amin’ny lalam-pirenena vonjimaika (RNT) faha-23 mankany Anosibe an’ala no voakasik’izany.
Rarivato mirefy 3 200 metatra tsy mivadimandry no hovitaina.
Volan’ny faritra Alaotra-Mangoro madiodio no miantoka ny tetikasa, izay sahanin’ny orinasa Mavitrika Sarl.
Miova endrika vokatry ny fifandaminana noho izany ny fifamoivoizana eto Moramanga.
Tombanana ho 1 500 isan’andro eo ny isan’ny fiara mampiasa ny lalam-pirenena faha-2, izay mifandray amin’io lalana hatao rarivato io.
Fiara miisa 10 isan’andro eo kosa no mampiasa ny RNT23.
Ny fananana trano, na hipetrahana na ampanofaina dia mampisy fitoniana ara-tsaina satria manana trano hipetrahana, ary azo lovain'ny taranaka tsy hisedran'ireo zanaka ny fijaliana efa nandalovan'ny tena.
Mipetraka avy hatrany izany ny fanontaniana hoe ohatrinona no mahavita trano, ankoatran'ny vidin-tany raha tsy manana lova tany napetraky ny ray aman-dreny.
Andao ary ezahintsika kajiana izany amin'ny ohatra, trano misy efitra 3 (Salon + chambre 2) miampy lakozia sy toilettes ao anatiny, rihina iray, mitafo béton dalle eo amboniny (iniantsika tsy atao tafo fanitso, sao mbola ampiakatra rihina any aoriana).